Pantone Studio dia manampy anao hisambotra loko amin'ny fakantsarinao finday | Famoronana an-tserasera
Fantatra tsara i Pantone asio marika ny loko amin'ny vanim-potoana ary ho an'io sokajy loko io izay mora kokoa ny mamantatra paleta. Marika ekena izy io ary efa teto matetika mba haka ny fironana sasany amin'ny loko toy ny ireo loko 10 tamin'ny 2017 ireo.
Ao amin'ny Android sy iOS dia nanana andian-fampiharana izahay afaka alao ny tonony marina misy loko iray hampiasa azy io amin'ny asany amin'ny Internet na karazana endrika hafa. Fa ny zavatra tsy hitanay dia ny fampiharana ofisialy Pantone noho io antony io. Izany no antony volana vitsivitsy lasa izay, ny fampiharana antsoina hoe Pantone Studio dia natomboka tamin'ny iOS.
Ity fampiharana ity dia manolotra ny fampanantenanao hisambotra azy roa tena loko rehefa sary miaraka amin'ny fampiharana fakantsary ho toy ny loko mety hiseho amin'ny sary izay notehirizinay tamin'ny finday.
Antony iray hafa mahatonga ny fisian'ity fampiharana ity ny fanompoana ho torolàlana Pantone nomerika, miaraka amin'ireo fanondroana rehetra momba ny loko sy ny kinovan'ny loko RGB, ny loko CMYK ary ny lokon'ny hexadecimal. Rokkan no masoivoho niandraikitra ny famoronana an'ity rindranasa ity. Miaraka amin'izany, Pantone dia manome antoka fa mahatratra mpampiasa mpampiasa maro an'isa izay manana ny fomba tsara indrindra hanatonana ny mpankafy, ny mpanaraka na koa ny mpanjifa amin'ny ho avy.
Araka ny tranokalan'ny Rokkan, misy ankehitriny 3,7 tapitrisa mpamorona nomerika miaraka amin'ny fizotran'ny famoronana mifototra amin'ny tontolo teknolojia. Eo anelanelan'ny Pantone sy Rokkan izy ireo dia manana tanjona hitondra ny vokarin'ny orinasa rehetra, na dia eny aza, mbola miandry azy ireo hampiasaina amin'ny Android izahay, satria tsy tratra ity fampiharana ity
Ny andiany voalohany an'ny Pantone Studio dia manana interface tsara manintona sy intuitive izay ahitana ny atiny sy fitaovana ahafahanao mahazo aingam-panahy amin'ny hevitra vaovao: fironana Pantone, mombamomba ireo mpamorona sary ambony, loko amin'ny taona, tranomboky fanampiny misy loko maherin'ny 10.000 ary maro hafa.
Sintomy amin'ny iOS izany
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Mba hisamborana sy hamantarana ny loko dia tsy misy tsara noho Pantone Studio